Ọnụ ego dị elu nke ọdịda Web Design dịkarịsịrị | Martech Zone
Ọnụ ego dị elu nke ọdịda Web Design na-adịkarị
Mgbe ị gụrụ ọnụ ọgụgụ abụọ a, ị ga-eju anya. Karịrị 45% nke azụmaahịa niile enweghị weebụsaịtị. Na nke Mee N'onwe Gị (Mee-Ọ-Onwe Gị) nke na-amalite iwu saịtị, 98% n'ime ha dara na mbipụta akwụkwọ otu ma ọlị. Nke a anaghịdị agụ ọnụọgụ azụmaahịa nwere weebụsaịtị nke na-anaghị ebugharị ebugharị… nke m kwenyere na ọ bụ pasent ọzọ dị mkpa.
a ozi sitere na Webydo na-egosipụta isi ihe dị na atụmatụ web na-adaghị adaba na mgbagwoju anya nke ngwọta yana mkpa maka nguzozi n'etiti ụfọdụ imewe na ọtụtụ mmepe. Gbakwunye na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-amakarị na ngwaọrụ ndị na-esighi ike ha nwere, ọ na-ewetara ọdachi maka ọtụtụ azụmaahịa.
N'etiti usoro DIY na usoro ntanetịime B2B, akụkụ nke atọ na-apụta, na-enwe olileanya imebi ahịa atụmatụ weebụsaịtị. Webydo bụ B2B nọọrọ onwe ya maka ndị ọkaibe ọkachamara na-achọ ịmepụta weebụsaịtị dị elu maka ndị ahịa ha, yana atụmatụ ahaziri iche na edeghị otu akara koodu ma ọ bụ ndị mmepe ego.
Ejila m Webydo mee ihe kama ịtụ anya iwere ya maka nnwale nnwale. Ikekwe nsogbu m bụ na m bụ onye nrụpụta karịa onye mmebe. M na-agbasaghị nweta mmụọ nsọ site na atụmatụ ndị ọzọ wee tinye ha na ntanetị anyị. M obi ụtọ na-aga n'ihu mma na njem, ezie, na ike ha wuo mgbanwe agbanwe agbanwe na dezie na ebe na dọrọ na dobe Ike.
Aga m ekwu eziokwu na achọghị m itinye ego na mmepe. N'ezie, anyị na-arụkarị ọrụ n'azụ ndị na-emepụta ihe mara mma iji wuo ngwa ngwa na ngwa ngwa na-agbanwe agbanwe na atụmatụ ha. Ibe abuo nwere ike iyi otu, mana akụrụngwa na nzuzo nwere ike ime nnukwu ihe na peeji ọsọ na omume ndị ahịa.
Ekwetaghị m na nnukwu nsogbu chere ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ weebụ bụ ngwaọrụ, ekwenyere m na ọ bụ uru nke ọrụ ahụ. Ọtụtụ afọ gara aga, ahụrụ m otu ọkà okwu kwuru maka otu ụlọ ọrụ mefuru ọtụtụ narị puku dọla iji mepụta ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ha, mana ụjọ na-etinye ụfọdụ n'ime nke ahụ na weebụsaịtị ha. Ebe nrụọrụ weebụ gị bụ oghere gị na ụwa. Don'tnweghị echiche nke abụọ gbasara ROI nke ihe ndina na ebe obibi gị, mana ị bụ nickel ma belata ụlọ ọrụ weebụ na ụlọ ọrụ mmepe. Ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ya.
Anyị ahụla mbụ na njedebe. Anyị na ndị ọrụ nwere ụlọ ọrụ nwere ụlọ obibi, Mee N'onwe Gị nke na-enwetaghị okporo ụzọ na enweghị ụzọ… na-efu ụlọ ọrụ ọtụtụ narị puku ma ọ bụ ọbụna nde dollar na azụmaahịa. Anyị ahụla ụlọ ọrụ ndị ọzọ ka ha na-emefu ego ha na atụmatụ mara mma nke na-enweghị atụmatụ maka inweta atụmanya, ịchekwa ndị ahịa, na ịkwalite ha.
Anaghi etinye otutu ego anyi n’ime saiti ndi n’ete ahia. Ọtụtụ mgbe ọ naghị arụ ọrụ nyochaa otu anyi nwere ike isi melite oke ahia ha ma chụkwuo azụmaahịa maka akara ala ha. Nke ahụ bụ ego emefuola nke ọma! Anyị na-ewu saịtị ndị mara mma maka ndị ahịa na obere ọnụọgụ ego na oge nke ọtụtụ ụlọ ọrụ… ihe dị iche bụ na nke anyị na-emepụta ego!
Ọ bụrụ na ị bụ onye mmebe weebụ, lelee Webydo! Ọ dị ka ọganihu na-akpali akpali maka ụlọ ọrụ ahụ.
Tags: onye na-amu amu weebụsaịtịb2b ndị na-ese iheb2b ndi mmepeb2c imewe weebụCMSokike web designndị na-emepụta ihe na ndị mmepedotnetnukeDrupaljimdoJoomlamagentooscommerceọkachamara na-emepụtaọkachamara mmepesquarespaceubracoweb imewemmebe mmebe weebụụlọ ọrụ mmepụta weebụimewe weebụweebụmmefu ego weebụsaịtịweebụsaịtịwebidowee jirikwa yawixWordPressyawl
Jul 7, 2015 na 3:17 PM
Na-akpali nnọọ mmasị. A na-eche maka nke a ọtụtụ mana site na 'otu ị ga - esi nyere SMB aka na - enweghị atụ iji melite ROI nke ahịa ha?' Ga-ahụ n'anya nzaghachi gị na post post a na nso nso a.